Ithegi: idrone | Martech Zone
Ndithenge iDoneone entsha yabaThengi… kwaye iyamangalisa
NgoLwesine, uJanuwari 9, 2020 NgoLwesine, uJanuwari 9, 2020 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, bendicebisa ikhontraktha enkulu yophahla kubukho babo kwi-Intanethi. Siphinde sakha kwaye salungiselela indawo yabo, saqalisa iphulo lokudropa eliqhubekayo lokufaka uphononongo, kwaye saqala ukupapasha iiprojekthi zabo kwi-intanethi. Inye into eyayilahlekile, nangona kunjalo, yayingaphambi nasemva kweefoto zeepropathi. Ngokungena kwi-quote yabo kunye nenkqubo yolawulo lweprojekthi, ndakwazi ukubona ukuba zeziphi iipropathi ezivaliweyo kunye nokuba iiprojekthi zigqityiwe nini. Emva
Ngaba ukuhanjiswa kweDrone kuya kuhamba ngokukhawuleza?
NgoMgqibelo, uJanuwari 26, 2019 NgoMvulo, nge-28 kaJanuwari, 2019 Douglas Karr
Ukuvavanya itekhnoloji yakutshanje yinxalenye yolonwabo lomsebenzi wam. Ndihlala ndithenga itekhnoloji ukuyivavanya kwaye ndiqinisekise ukuba ndiyaqhubeka. Kwiinyanga ezidlulileyo, ndathenga i-DJI Mavic Air, ndayivavanya nabathengi abambalwa. Andinguye umdlali webhola, ngenxa yoko ndimhle emva komlawuli. Emva kokuyivavanya kwiinqwelomoya ezimbalwa, ndamangaliswa yindlela ezi zixhobo zibhabha ngayo. Idrone iyasusa kwaye
NgoLwesihlanu odlulileyo, bendinengxoxo-mpikiswano enkulu nomhlobo wam, uBill Hammer. Isikhundla sakhe yayikukuba ukuba nohlahlo-lwabiwo mali lomkhosi omkhulu akenzanga nto ngaphandle kokungcwaba uqoqosho. Ndiphikisile ukuba umkhosi, ngeendlela ezininzi, ulingana norhulumente otyala imali kuphuhliso lobuchwephesha obutsha kunye nemveliso eninzi. Ndingadibanisa ukuba, kwishishini 'lokubulala okanye ukubulawa', iziteyki azikho phezulu xa kufikwa